प्रदेश राजधानीमा नेताहरुको स्वार्थले चर्किएको आन्दोलन – Everest Dainik
प्रदेश राजधानीमा नेताहरुको स्वार्थले चर्किएको आन्दोलन
गणेश तिवारी । देशभरी प्रदेश राजधानीको विवादले आन्दोलन हिंसात्मक हुँदै गइरहेको छ । यता प्रदेशसभाको बैठक बसेपछि मात्रै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि मार्गप्रशस्त हुने संवैधानिक व्यवस्था भएका कारण देउवा सरकार प्रदेशको अस्थायी राजधानी संभव भएसम्म छिटो तोक्नु पर्ने दवावमा छ । नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयलाई प्रदेशका लागि संभावित राजधानीको अध्ययन गरी सिफारिस गर्न भनेको थियो ।
सरकारले अस्थायी मुकाम भनेर सातवटै प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोकेपनि आन्दोलन भने झन तीब्र भएको छ । यसका पछाडि निर्वाचनका क्रममा बिभिन्न दलका नेताहरुले राजधानीको एजेण्डा र आश्वासन दिएर मत माग्ने रणनीति अपनाउनु मुख्यरुपमा जिम्मेवार रहेको देखिन्छ ।
प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको क्रममा खासगरी प्रादेशिक राजधानी निर्णायक हुन सक्ने क्षेत्रका हरेक जसो नेताहरुले राजधानी अमूक स्थानमा ल्याउने वाचा र वचनबद्धता समेत दिए । एउटै प्रदेशभित्र नेतापिच्छै ‘काल्पनिक’ राजधानी घोषणा भए । अहिले त्यही संवेदनाका कारण सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्दा बिरोध देखिएको छ ।
त्यसो त भोली प्रदेशसभाले सबै पक्ष विचार गरेर प्रदेशको राजधानी तोक्ने व्यवस्था रहेको छ । खासगरी त्यो बेला कुन स्थानमा राजधानी आवश्यक छ भन्ने घनिभूत छलफलकाे आवश्यक पर्दछ । तर आमरुपमा एउटा बुझाई के छ भने अहिले सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्दा चुपलागेर बसे त फेरि भोलि यसैलाई आधार मानेर अन्त सार्न सकिदैन । यो मनोविज्ञानका कारण अस्थायी राजधानीका बारेमा देश नै आन्दोलित बनेको देखिन्छ ।
यतिखेर खासगरी सातवटा प्रदेश मघ्ये ४ र ६ बाहेक १, २, ३, ५ र ७ मा अस्थायी राजधानीका लागि तोकिएका स्थानमाथि असन्तुष्टि देखिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयकै सिफारिसमा अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अस्थायी राजधानीका लागि प्रदेश नम्बर १ को विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को भक्तपुरको ठिमी, ४ को पोखरा, ५ को दाङ, ६ को सुर्खेत र ७ को धनगढी रहने गरी खाका तयार पारेको छ ।
सम्बन्धित् समाचार इतिहास, पुष्पलालको शालिक ढाल्नेले पढुन्
प्रदेश नम्बर १ को राजधानी धनकुटालाई तोकिनुपर्ने माग गर्दै स्थानीयले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । तालाबन्दी र आमहड्तालसहित आन्दोलनका कारण धनकुटा र यसका आसपासका जिल्लाको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । बन्दका कारण बजारपसल ठप्प छ भने कोशी राजमार्गमा सवारी नचल्दा उत्तरी जिल्लाहरु तेह्थुम, संखुवासभा, भोजपुरमा समेत बन्दको प्रभाव परेको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकालाई प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने माग गर्दै धरान उपमहानगर उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीको नेतृत्वमा सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ । आन्दोलनलाई थप बल दिन गत सोमबार प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा प्रदर्शन गरिएको थियो ।
त्यस्तै २ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुरलाई बनाउने सरकारी तयारीविरुद्ध वीरगंजमा प्रदर्शन गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न वीरगञ्जलाई नै प्रदेश राजधानीको माग गर्दै सुरु भएको प्रदर्शनमा कांग्रेस, एमाले लगायत विभिन्न दलले सहभागिता जनाएका थिए । प्रदेश नम्बर २ को राजधानीका लागि जनकपुर र वीरगञ्जले दावी गर्दै आएका छन् ।
सरकारले भक्तपुरको ठिमीमा प्रदेश नम्बर ३ को राजधानी घोषणा गरेपछि काभ्रेका राजनीतिक दलहरुले सर्वपक्षीय भेला गरेर यसको बिरोध गरेका छन ।
सम्बन्धित् समाचार सरकारलार्इ चुनाैति दिदै आन्दोलनकारीले घोषणा गरे धनकुटालार्इ प्रादेशिक राजधानी
उनीहरुले संघीयताको मर्म अनुसार बनेपा वा धुलिखेल ३ नं प्रदेशको राजधानी उपयुक्त हुने दावी गरेको छन् ।
त्यसैगरी प्रदेश नम्बर ५ को अस्थायी राजधानी दाङ्लाई तोक्ने सरकारी तयारीको विरोधमा बुटवल र कपिलबस्तुमा प्रर्दशन सुरु भएको छ । एमाले नेता विष्णु पौडेलले कुनै पनि मूल्यमा बुटवललाई प्रदेश नं ५ को राजधानी बनाई छाड्ने अभिव्यक्ति दिएका छन । तर वामगठबन्धनबाट नै दाङ २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा र प्रदेश नं ५ को मुख्यमन्त्रीका प्रमुख दावेदार एमाले नेता शंकर पोखरेलले भने प्रदेशको राजधानी दाङमै बनाउनु पर्ने धारणा राखेका छन् । उता ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी माग गर्दै नेपालगन्जमा पनि प्रदर्शन भएको छ ।
प्रदेश नम्बर सातमा समेत प्रदेशको राजधानीलाई लिएर आन्दोलन भएको छ । सरकारले कैलालीको धनगढीलाई ७ नं प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने खाका तयार पारेपछि माओवादी नेता लेखराज भट्टले उक्त निर्णय गराएको भन्दै डोटीमा उनीविरुद्ध समेत आन्दोलन शुरु भएको छ । यद्यपी नेता भट्टले भने अस्थायी राजधानी तोक्ने कुरामा आफ्नो भूमिका नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
यसरी देशव्यापीरुपमा देखिएका आन्दोलन हेर्दा राजनीतिक दलहरुले तत्कालको लाभका लागि जनताको मनोविज्ञानसँग खेल्ने रणनीति मुख्यरुपमा जिम्मेवार देखिन्छ । निर्वाचनका क्रममा भोट बटुल्नका लागि शीर्ष नेताहरुले नै प्रादेशिक यथार्थको उपेक्षा गरेर राजधानी आफ्नै जिल्लामा तोक्ने किसिमका अभिव्यक्ति दिएपछि अहिले आन्दोलन बढेर गएका हुन ।
सम्बन्धित् समाचार घरेलु कामदारलाई पनि गरिखाने देउ
अर्कोतर्फ प्रदेश के हो ? प्रदेशका काम कारवाही, अधिकार क्षेत्र, त्यसको स्वरुप र त्यस अनुरुप राजधानी बनाउन आवश्यक पर्ने भौगौलिक, सामरिक, भौतिक, सामाजिक र पर्यावरणीय आधारका बारेमा नेताहरुले कुनै कुरा नगर्ने र यसबारे बहस नचलेपछि आमजनताले राजधानी बन्ने बित्तिकै सबै सेवा सुविधा पाइने आँकलनका आधारमा आन्दोलन चर्काएका छन् । तर आन्दोलनकारीहरुले भनेजस्तो या नेताहरुले दावी गरेजस्तो प्रदेशको राजधानी आफूले चाहेकै स्थानमा तोक्ने कुरा सम्भव हुने विषय भने होइन ।
सेवा र सुविधा आफ्नै आँगनमा पुर्याउन प्रदेशको राजधानी तोक्दैमा सम्भव हुन्न भन्ने कुरा राजनीति नेतृत्वले सुझबुझका साथ नागरिकलाई स्पष्ट रुपमा बुझाउनु जरुरी छ । अर्कोतर्फ, सरकारले अस्थायीरुपमा तोकिएका स्थानहरुका बारेमा समेत कारणसहित जनतालाई भन्न सकेको देखिँदैन । अमुक प्रदेशको अमुक स्थान यो यो कारणले उपयुक्त छ भन्ने कुरा सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्दछ ।
तर बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने अहिले तोकिएका स्थान अस्थायी हुन । प्रदेशको नामांकरण र राजधानीलगायतका कुराहरुबारे प्रदेश सरकारले निर्णय गर्ने हो । प्रदेश सरकारमा हामीले नै निर्वाचित गरेर पठाएका प्रतिनिधिहरु छन् । त्यसैले अहिले आन्दोलनका नाममा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलाई पर सार्ने वातावरण बनाउनुको साटो प्रदेशको राजधानीका लागि वैज्ञानिक आधारको खोजीमा स्थानीय प्रदेशले गृहकार्य गर्ने र केन्द्रले समेत सोही किसिमले सहयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु जरुरी छ ।
ट्याग्स: Province Capital
युएईमा ४१ लाख ठगी गरी एक नेपाली फरार, पासपोर्ट धितो राखेर भारतीयसँग ऋण
शहिद परीवारको घरमा पुगेर दशै मनाउदै राज्य मन्त्री चौधरी
युवालाई नेपालमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकार प्रयत्नशील छः प्रधानमन्त्री
प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्रीद्वारा दशैँँको शुभकामना व्यक्त
युएईमा भिजिट भिसा सम्बन्धि नयाँ नियम समय थप गर्न देश छाड्नु नपर्ने
मिटरमा सञ्चालन नहुने ट्याक्सीलाई कारवाही गरिने
सुदूरपश्चिमको पर्यटन विकासका लागि पहल जारी छः पूर्वमन्त्री भट्ट
लेख्दा हात काम्छ ? कारण र समाधान जान्नुहोस्
नयाँ नोटमा न हस्ताक्षर छ नत नम्बर नै !